सैनामैनामा लाग्ने एक सय ११ओैं भड्छा महाेत्सव माघ २८ गते देखि
रेडियो टाइम्स मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००
सैनामैना । रुपन्देहीको सैनामैनामा रातिमा सुरु हुने र रातिमा नै समापन हुने १ सय ११ औं भड्छा महोत्सव तथा माघे औंसि मेला आयोजना हुने भएको छ । हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान संस्कृति जगेर्ना गर्न हाम्रो अभियान भन्ने मुल नाराका साथ माघ २८,२९ र ३० गतेसम्म भड्छा गाउँ समाज सैनामैना नगरपालिमा वडा नंं. ८ रूपन्देहीको आयोजनामा मेला सञ्चालन हुने भएको हो ।
मेला सञ्चालनको तयारी पूरा भएको र यो वर्ष मेला १ सय ११ औं वर्षमा प्रवेश गरेको मेला सञ्चालक मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष रामशरण न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि जानकारी दिनुभयो । महोत्सव रातिमा नै सुुरु भएर रातिमा नै समापन हुने भएकाले भड्छा मेलाको विशेष विशेषता रहेको छ ।
ऐतिहासिक मेला सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेर तयारी गरेको उँहाले बताउँँनुभयो । मेला २८ गते राति प्रदेशसभाका सदस्य भूमिश्वर ढकालले उद्घान गर्ने र सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित वडा स्तरिय भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको न्यौंपानेले बताउँनुभयो । दिउँसोमा भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने र रातीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने न्यौंपानेले बताउँनुभयो ।
ऐतिहासिक भड्छा मेला सम्पन्न गर्नका लागि सैनामैना नगरपालिकावाट ४ लाखको सहयोग पाएको आर्थिक संयोजक बुद्धिराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी खर्च ब्यवस्थापनको लागि ब्यापारी र स्थानीयवाट सहयोग जुटाइने उहाँले बताउँनुभयो । वि स १९६७ सालवाट भड्छा गाउँमा मेला सुरू भएको र २०६७ सालवाट औंपचारिकता दिदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांस्कृतिक संयोजक हरि नारायण चौधरीले मेलामा माघ २८ गते राति ८ वजे उद्घघाटन हुने र मध्य राति १२ वजेसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउँनुभयो । मेलामा झुमडा नृत्य प्रतियोगिता, लोक नृत्य, मयुर नांच झर्रा नांच प्रस्तुत हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि वडा नं. ८ का अध्यक्ष नै मेलाको मूल आयोजक समितिको संयोजक हुने ब्यवस्था रहेको छ । पहिले भड्छा गाउँ समाजका ब्यक्ति नै मेला संयोजक बनेर मेला सञ्चालन गर्थे । स्थानीय सरकारले मेला सञ्चालनको लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००
सैनामैनाका ६ जना दृष्टिबिहिन युवाहरु आत्मानिर्भर बन्दै मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००
नेपाली काँग्रेस सैनामैना नगर सभापति पदमा नारायण खनालको उम्मेद्वारी घोषणा मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००
हरितालिका तीज र यसको मौलिकता मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००
सैनामैनामा रेग्मीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गठन मंगलबार, माघ २७, २०७७, ०८:४५:००